1.HOW in Mudanayaasha adeeg iCloud Photo Sharing
2.HOW si ay u wadaagaan iCloud Album iyo dar Photos in Album Wadaago ku
3.HOW inay jeclaan iyo Comment on Photos wadaag
ICloud Photo Sharing yimid dhisay kasta iPod, iPad ama iPhone oo macruufka 7, macruufka 8 ama macruufka 9 ilaa taariikhda. Iyada oo taageero ka adeegan, shaqsi ahaan si fudud la qaybso qoyska ama saaxiibbada karo ururinta sawiro. Tani waxay sidoo kale u ogolaataa qofka in aynu qof oo kale ku dar sawirada, sidan waxa ay taasi adeega iCloud Photo Sharing khasnad weyn oo xusuus. Waxaa intaa dheer, xubno ka mid ah Phot Stream sidoo kale awood u leh inay jeclaan iyo faallo sawirada. Marka qof abuuraa Photo Stream ah (Shared) iyo yeedhi dadka, kuwa kale ka heli doontaa martiqaad inuu ku biiro. Dhinaca kale oo kaliya u baahan yahay in ay aqbalaan oo ay ku bilaaban doono helo wargelinta iyo wararka ka codsiga ah Photos mar kasta oo qofku ka tirsan kooxda in ay ku darayaa sawiro waxa ku jira. Waayo, markii dadka aan haysan Macs, iPads ama iPhone app iCloud Photo Sharing ayaa sidoo kale ka dhigi kartaa link iCloud ah taas oo markaas la wadaagi karaa dadka kale ka mid ah. Ay leedahay in la sameeyo oo dhan waa guji xidhiidhinta oo ay la qaadan doono webpage ee iCloud Photo Sharing in.
Qeybta 1 SIDA LOO Mudanayaasha ADEEGYADA-WADAAGIDA PHOTO iCloud
Si aad u isticmaali adeegyada iCloud Photo Sharing, qofka oo dhan u baahan yahay waa account iCloud la software cusub ee ku saabsan wixii ay macruufka, waxa ay noqon kartaa iPod, iPad ama iPhone. Way fududahay in la isticmaalo adeeggan, inaad sameyso waa inay raacaan tilmaamaha hoos ku qoran oo dhan:
1. aad screen gurigaaga tag in Settings,
3. In loo sahlo doorasho Photos ah.
4. Hadda halkan, si fudud awood Photo Sharing iCloud ah
The videos iyo sawiro ku iCloud Photo Sharing ha isticmaalin mid ka mid ah Kaydinta iCloud iyo qaabab sawir taageeray waa PNG, TIFF iyo jpeg. Wixii Videos ah qaabab ay taageerayaan yihiin QuickTime video files iyo MP $. Videos ayaa kor u bixin karaa ilaa 5 daqiiqo iyo xallinta 720p waxaa loo isticmaali karaa. In album la wadaago ee videos ugu badan iyo sawiro waxaad ku hayn kartaa waa ku dhawaad ​​5000ba Si kastaba ha ahaatee, marka xadka la gaaro waxaad u leedahay in ay tirtirto qaar ka mid ah videos ama sawiro.
A Photo Stream kaas oo la wadaago waxaa loo tixgeliyaa sida gaarka loo leeyahay oo dheeraad ah oo aamin ah si aad ula wadaagto ururinta sawiro leh oo keliya dadka aad doorato. Tan mararka qaar waxay kuu sahlaysaa marka aadan rabin in la sawiro warbaahinta bulshada, ama waxaa laga yaabaa in aadan haysan Twitter ah, ama wax kasta oo Facebook account warbaahinta bulshada. Waxaa intaa dheer, sida shabakadaha kale ee warbaahinta bulshada, in aad leedahay awood inuu ka hadlo ama sida sawirada hab amaan ah.
Part 2 sida loo wadaagayo iCloud album IYO DAR PHOTOS IN wadaago heestii
Wadaagista sawiro aad waa u fududahay adeeggan. Waxaad qaadan kartaa liiska dhagaystayaasha iyo dooran oo ka hadli karin sida iyo u arkaan aad videos iyo sawiro. Waxa kale oo ay ku siinaysaa awood u leeyahay inuu ku dar sawiro iyo videos in aad album haddii ay leedahay qalab macruufka ah. In la abuuro album la wadaago, kaliya raac tilmaamaha hoos ku qoran:
1. Tag photos taas oo shaashadda guriga,
2. Tubada calaamad ee qaybta lowermost ee shaashadda oo sheegtay in La Wadaago,
3. Tubada Sharing ka dibna New Album Wadaago.
4. Ku qor magaca ah album ka dibna tubbada "Next".
Hadda waxaad ugu yeedhi kartaa dadka cinwaanada email ama si fudud looga faa'idaysan Button Add ka xiriirada ka dibna la abuuro. Kale ayaa sidoo kale arki kartaa album aad ogolaansho ay si fudud u socdaan in ay Qaasaali liiska wadaago markaas Dadka iyo awood Website Dadweynaha.
Part 3 SIDA LOO RABI IYO faallo SAWIRADA
Si faallo ama sida qof ee sawirka kaliya sameeyo waxa soo socda:
1. Tubada app Photos ee ku saabsan qalabka macruufka,
2. Tubada tab ee la wadaago oo laga heli karo meesha ugu hooseysa,
3. Markaas tagto button Sharing taas oo ah bidixda sareysa,
4. tan aad leedahay inay hesho on the "Magaca Stream" Ka dib markii ay tani tahay sawirada meeye oo aad ka hadli karin ama aad jeceshahay. Hadda waxaad ku dari kartaa Wajigooda Smiley, ama uu u gudbiyo farriimo aad u qof aad jeceshahay.
> Resource > iCloud > Sida loo Mudanayaasha iyo isticmaali iCloud Photo Sharing.